Portal BIU www.biu.edu.ng/ Jereo ny fanavaozana ny fampiharana farany 2021: Vaovao an-tsekoly ankehitriny
Portal BIU www.biu.edu.ng/ Jereo ny fanavaozana ny fampiharana farany 2021
Portal BIU: Ny fahefan'ny Oniversite Benson Idahosa no nahafahan'ny vavahadin'ny mpianatra. Araka izany, amin'ny maha-mpianatra na ho avy mety ho mpianatra ny sekoly dia tokony hahaliana anao ity fampahalalana ity.
Ary amin'ity lahatsoratra ity dia hahazo fampahalalana momba ny fidirana amin'ny vavahady BIU ianao. Fa aloha, alohan'ny hidiranao ao, inona no fantatrao momba ny Oniversite Benson Idahosa?
Amin'ity vavahady ity, hetsika akademika maro no azo tanterahina amin'ny fomba tsy misy ahiahy. Na izany aza, raha te hahalala bebe kokoa momba an'io dia mila mamaky ity lahatsoratra ity ianao.
Benson Idahosa University (BIU) dia oniversite tsy miankina sy kristianina any Benin City, Nizeria. BIU (nantsoina taloha hoe Christian Faith University) dia nomena anarana ho fanomezam-boninahitra an'i Arseveka Benson idahosa.
Minisitra Pentekotista karismatika avy any Benin City, Nizeria izy, ary taratry ny finoany ny filazantsara. Ary koa, izy no filoha voalohany tao amin'ny oniversite. Ny filohan'ny Oniversiten'i Benson Idahosa ankehitriny dia Rt. Rev. (Dr.) Faith Emmanuel Benson Idahosa.
Izy dia zanakalahin'i Benson Idahosa. Ary izy koa dia Evekan'ny CGMi Faith Arena ary mpandrindra, Next Generation Leadership of the Church of God Mission. BIU dia nahazo fankatoavana avy amin'ny sampana fankatoavana fampianarana ambony any Nizeria, ny Vaomieran'ny oniversite nasionaly.
Ny maha-zava-dehibe ny vavahady BIU
Raha mitady ianao Fidirana amin'ny Portal BIU, eto ambany ny valiny ilainao. Na izany aza, alohan'izay dia andeha hodinihintsika ny tsy fahatomombanan'ity vavahady ity.
Ireto ambany ireto ny tombony lehibe azo avy amin'ny BIU vavahadin-tserasera
Izy io dia ny famoronana kaonty na fidirana hanatanterahana hetsika akademika sasantsasany amin'ny fanamorana.
Ary eo koa no anaovana ny dingana rehetra amin'ny oniversite sy ny fizotry ny fidirana.
Ankoatr'izay, ny vavahady dia ampiasaina amin'ny tanjona maro samihafa toy ny fangatahana endrika fidirana. Ary ampiasaina amin'ny fisoratana anarana, ary ny fanamarinana ny lisitry ny fidirana.
Ankoatr'izay, manampy amin'ny fidirana amin'ny satan'ny fidirana, taratasy fidirana, fampidinana ny valin'ny fidirana ary asa hafa mifandraika amin'ny fidirana
Azonao atao ny mitsidika sy miditra amin'ny Portal an'ny mpianatra ao amin'ny anjerimanontolo Benson Idahosa amin'ny alàlan'ny solosaina na finday amin'ny alàlan'ity rohy manaraka ity:
Portal ho an'ny mpianatra BIU: Kitiho eto
Ary koa, tranokala lehibe BIU: Kitiho eto
Ankoatra izany, Tsidiho eto
Ary koa, Tsidiho eto
Adiresy mailaka an'ny mpirafy BIU: [email voaaro]
Na izany aza, raha misy zavatra tsapanao momba ny fidiran'ny vavahadin'ilay mpianatra ao amin'ny anjerimanontolo Benson Idahosa, azafady, mandefasa komity etsy ambany ary hamaly izany izahay raha vantany vao azo atao.
Ho fanampin'izay, aza misalasala mankasitraka ireo sehatra sosialinay mba hizarana, hifanakalo hevitra ary hahazoana ireo fanavaozana farany momba ilay andrimpanjakana.
Benson Idahosa University (BIU) Fanampiana amin'ny vavahady
1. Drafitra fandoavam-bola ho an'ny mpianatra vaovao
Kitiho eto ary midira amin'ny alàlan'ny Jamb Reg anao. isa (solonanarana) ary tenimiafina Default (tenimiafina1). Avy eo havaozy ny mombamomba anao manokana. Ankoatr'izay, afaka:
Kitiho ny sarany raha te handoa ny saram-pankatoavana.
Mandrosoa ihany koa mankany amin'ny farany ambany amin'ilay pejy ary kitiho ny sarany aloa.
Tsindrio ny tohiny, ary avy eo soraty ny karatra fifanakalozana ho an'ny fandoavam-bola amin'ny fanekena.
Ho fanampin'izany, mandrosoa any amin'ny Banky VOALOHANY na UBA miaraka amin'ny ID Transaction raha te handoa ny saram-pandraisana ianao.
Na izany aza, aorian'ny fandoavana vola, REDO Dingana 1
Kitiho ny trano fandraisam-bahiny ary safidio ny trano fandraisam-bahiny tianao.
Tsindrio ihany koa ny sarany ary zahao ny fandoavam-bola feno raha mandoa amin'ny alàlan'ny fandefasana hafa ianao, midina mankany amin'ny faran'ny pejy ary kitiho ny sarany.
Ho fanampin'izany, kitiho ny tohiny ary soraty ny fizaram-bola voalohany na ny ID fifanakalozana feno.
2. Fomba famerenana amin'ny laoniny ny fandoavam-bola ho an'ny mpianatra
Kitiho eto ary midira amin'ny alàlan'ny Jamb Reg anao. isa (solonanarana) ary tenimiafina default (password1)
Mandehana any amin'ny serivisy ara-bola hahazoana fahazoan-dàlana amin'ny saram-pianarana akademika fivoriana raha tsy mandeha ny kaontinao. Mandrosoa mankany amin'ny tarika TIC miaraka amin'ny fahazoan-dàlana hampiasana ny kaontin'ny mpianatrao.
Vaovao farany ny mombamomba anao manokana.
Tsindrio koa ny trano fandraisam-bahiny ary safidio ny trano fandraisam-bahiny tianao.
Ho fanampin'izay, kitiho ny sarany ary soraho ny fandoavam-bola feno raha toa ianao ka mandoa vola hafa feno dia hidina hatrany amin'ny faran'ny pejy ary kitiho ny sarany aloa.
Ankoatr'izay, kitiho ny tohiny ary soraty ny fizaranao voalohany na karama feno momba ny fifanakalozana
Mankanesa any amin'ny Banky VOALOHANY na Banky UBA miaraka amin'ny karatra Transaction ho an'ny fandoavam-bola
Mino izahay fa nanampy betsaka anao ity lahatsoratra ity. Aza misalasala mizara amin'ny hafa amin'ny habaka media sosialy rehetra.
Benson Idahosa University Post UTME Fanontaniana taloha 2021 & Valiny Download PDF
Daty famerenana BIU 2020 / Fianarana ho an'ny mpianatra vaovao sy miverina
Benson Idahosa University Post UTME Form 2020/2021 Fampiharana fitiliana fizahana
Ny lisitra fidirana ho an'ny oniversite ao Benson Idahosa 2016/17 dia nivoaka
Ampidiro izao Ho an'ny toerana misy ny oniversite Benson Idahosa ho an'ny Lehiben'ny mpanam-pahaizana anatiny efa za-draharaha - 2016
Misorata anarana izao ho an'ny mpiasan'ny kaonty ao amin'ny Petros Management Consulting
FCAHPTVom ATBU Post UTME / DE Form an'ny fizarana fizarana fizarana 2020/2021
Tags: Benson Idahosa University, Fanampiana amin'ny vavahady anjerimanontolo benson idahosa (biu), vavahady biu, zava-dehibe amin'ny vavahady biu
« FUNAAB Student Portal www.unaab.edu.ng/ Hizaha ny vavahady fampiharana farany
Injeniera sivily injeniera (Yobe) amin'ny fandaharan'asan'ny Firenena Mikambana momba ny fampandrosoana 2021 »